Fahasalamana sy fanabeazana: nanolotra 6 tapitrisa dolara ny Koreanina | NewsMada
Fahasalamana sy fanabeazana: nanolotra 6 tapitrisa dolara ny Koreanina
Ho fanatsarana ny fiainan’ny zatovo malagasy amin’ny sehatry ny fanabeazana, fahasalamana ary fiarovana azy ireo, nanome tohana amin’ny vola ny governemanta amin’ny alalan’ny Tahiry koreanina ho an’ny fampandosoana (Koica).
Mitentina 6 tapitrisa dolara ny sorabola ampiasaina ao anatin’ny dimy taona (2017-2021) ho an’ny faritra Anosy ihany. 200 000 eo ho eo ny zatovo iantefan’ny asa rehetra fa manana tombony ny zatovovavy mahatratra 99 383. Tanjona ny fanatsarana ny fahasalaman’ny zatovo amin’ny fampihenana ny vohoka aloha loatra sy ny fampanambadiana ny ankizivavy latsaky ny18 taona. Hampiroboroboana ihany koa ny zon’ny zatovo ary ampiana izy ireo hahazo fanabeazana manana kalitao.
Eo amin’ny fahasalamana amin’ny fananahana, betsaka ny zatovo miteraka mialoha ny faha-18 taony izay mety hiteraka loza ho azy. Amin’ny vehivavy 10 maty isan’andro mandritra ny vohoka na eo am-piterahana, zatovo avokoa ny telo amin’izy ireo. Ho an’ny faritra Anosy manokana, 64,4% ny zatovovavy mbola tsy feno taona lasa manambady ary 26,9% ny ankizivavy latsaky ny 15 taona (fanadihadiana Ensmod 2012-2013) . Amin’ny ankapobeny, 12 taona eo ho eo no manomboka manao firaisana ara-nofo ny ankizivavy ary tsy vitsy ireo mitondra vohoka sahady vokatr’izany. Antony nametrahana ny mpanentana tanora manabe olon-tsahala izany.
Ho an’ny fanabeazana, eo anelanelan’ny 22 ka hatramin’ny 26% ny tahan’ny fandaozan’ny ankizy ny sekoly eny amin’ny CEG raha 20% ny taha nasionaly, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny Unicef misahana ny fanabeazana ao anatin’ny faritra. Ao anatin’ny tetikasa, hatsaraina ny kalitaon’ny fanabeazana ary ampitomboina ny fahazoan’ny mpianatra misitraka fampianarana manana kalitao tsara.
Manatanteraka ny asa rehetra any amin’ny faritra Anosy ny Unicef sy ny minisiteran’ny Tanora, ny Mponina, ny Fanabeazana ary ny Fahasalamana.